Saxaafada oo laga xusey Garowe
21 Jan 21, 2013 - 6:28:13 AM
Hoolka Shirarka Hayada PDRC ee magaalada Garowe ayaa maanta 21 January,2013 lagu qabtey xuska maalinka saxaafada Soomaliyeed oo ku beegneyd maanta.
Masuuliyiin ka socdey labada gole ee dowladda Puntland ,Sxafiyiinta ,culimo iyo aqoonyahano ayaa ka qaybgalay munaasabada Garowe lagu qabtey ee maalinka Saxaafada Soomaliyeed.
Dhamaan dadkii hadalada ka soo jeediyey xaflada waxay ku dheeraadey muhiimada maalinka ay saxaafada u leedahay iyo wariyaasha oo lagula dardaarmey inay u dhabar adeegaan adeega umaddooda.
Suugaan ayaa laga soo jeediyey intii ay socotey xafladan ,waxana PDRC ay balan qaadey inay siiw adi doonto taageerada ay u fidiso warbaahinta Puntland.
Wasiirka Warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaa soo xirey xuskan Garowe lagu qabtey waxana uu ku dheeraadey xaalada Saxaafada Puntland iyo baahida loo qabo inay ka qayb qaadato horumarka dalka ka socda gaar ahaa nidaamka Xisbiyada badan.
Somalia ayaa ah dalka loogu waxyeelo badanyahay Wariyaasha Dunida ,waxana iskugu darsamey Dhaqalalaha ay helaan oo kooban iyo eed dhinac walba ka soo gaareysa oo mararka qaar gaarta heer khaarijis ah.mana jirto ilaa iyo hadda cid loo qabtey ilaa 18 wariye oo sanadkii tagay la diley Somalia.
Halkan ka dhagyso Warbixinta Siciid Soona ka diyaarshay Xuska